चार दिनमै दोब्बर संक्रमण – Dullu Khabar
९ बैशाख २०७८, बिहीबार ०३:५३
काठमाडौँ । मुलुकभर गत आइतबार १ हजार ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । चार दिनपछि बुधबार दोब्बरभन्दा बढी २ हजार ३ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ५२ जना छन् ।
यो संख्या बुधबार पुष्टि भएका संक्रमितको ४४.७४ प्रतिशत हो । काठमाडौंमा चार दिनअघि ३ सय २६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने बुधबार ७ सय ८६ पुगेको छ ।
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ६ सय ४७ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा २ हजार ३ सय ५१ जना अर्थात् २४.३७ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको हो । संक्रमित हुने दर वैशाख १ मा १२.७२ प्रतिशत थियो । ‘हरेक चार दिनमा संक्रमित दोब्बर हुने गरेको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने । कोरोना केही होइन भनेर हेलचेक्र्याइँ नगर्न उनले आग्रह गरे ।
दिनहुँ जति संक्रमित देखिन्छन्, सबैजसो घरमै बसेका छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये १० प्रतिशत पनि सरकारको निगरानीमा छैनन् । बुधबारसम्म १० हजार ५ सय ८२ जना सक्रिय संक्रमित भए पनि संस्थागत आइसोलेसनमा ८ सय ३६, आईसीयूमा १ सय ८० र भेन्टिलेटरमा ४७ गरी १ हजार ६३ जना संक्रमितमात्रै सरकारको निगरानीमा छन् । ९ हजार ७ सय ४६ आफ्नै कोठा र घरमा छन् । अघिल्लो चरणमा संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लक्षणसहित गम्भीर भएकालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो भने लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा कम्तीमा १४ दिन राख्ने गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५ सय जनाभन्दा बढी संक्रमितको व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो ।
यसका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको भवन, दुवाकोटको केएमसी अस्पताल, काठमाडौंको दहचोकस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको भवन, नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुमा सुकुम्बासीका लागि बनाइएको भवन, कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम केन्द्रको आइसोलेसन सेन्टर र राधास्वामीको भवनमा आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो । तीमध्ये इचंगुमा सबैभन्दा बढी ५ सयसम्म संक्रमितलाई राखिएको थियो । सरकारले यो संरचना एक गैरसरकारी संस्थालाई तीन वर्षका लागि दिइसकेको छ ।
यी केन्द्रहरूमध्ये आयुर्वेद तालिम केन्द्रलाई एक सातादेखि फेरि आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने अन्यत्र आइसोलेसनको कुनै पनि संरचना छैन । कीर्तिपुरमा पनि यसअघि राखिएका सबैजसो संरचना हटाइसकिएको छ । बेडहरू अन्यत्र लगिसकिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका कोरोना फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओलीले महानगरको छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर नभएको बताए । सेनासँग मिलेर एचडीयूसहितको आइसोलेसन बनाउने यसअघि निर्णय भए पनि संक्रमित घटेपछि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । काठमाडौंमा कीर्तिपुरमा बाहेक अन्यत्र संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘खरिपाटीमा भएका सबै संरचना हटाइसकियो,’ भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले भनिन्, ‘फेरि बनाउने कुरा चलेको छ ।’
मन्त्रालयले संक्रमण बढेकै कारण जरुरीबाहेक घरबाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । ‘हाम्रो संरचनाले धान्नै नसक्ने गरी बिरामी बढ्ने संकेत प्राप्त भएको छ, यस कारण जरुरी नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन र सभा, गोष्ठी, मिटिङ, जात्रा नगर्न आग्रह गर्दछौं,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
विगतमा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेकै कारण संक्रमण फैलिन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिला जे गरेर सफल भएको हो, त्यसलाई पालना गरिएको छैन,’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले भने, ‘घरमा सुरक्षित बस्न मिल्छ भने बस्दा हुन्छ तर थोरै कोठामा कोचिएर बस्ने हो भने उनीहरूलाई संस्थागत आइसोलेसनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । अहिले खर्च हुन्छ भनेर घरमा राख्दा उनीहरूले अरूलाई सारिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सारेकालाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुभन्दा अहिले संक्रमित थोरै हुँदै संस्थागत आइसोलेसनमा राख्नु सस्तो पर्छ ।’ अहिले देखिएका संक्रमितको व्यवस्थापन गर्दा पछि राज्यको खर्च जोगिने उनले बताए ।
संक्रमितको न कन्ट्र्याक ट्रेसिङ भएको छ न त स्वास्थ्य अवस्थाकै चासो लिएर निगरानी भएको छ । ‘मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको आठ दिन भयो, घरमै बसेको छु, कसैले तपाईंको अवस्था के छ भनेर सोधेको पनि छैन,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको बानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने एक युवकले भने, ‘तपाईं होम आइसोलेसन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जानकारी लिने पनि कोही आएनन् ।’ घरमा बस्दा के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने पनि कतैबाट केही थाहा नपाएको उनले बताए ।
उनको यो भनाइले पनि सरकारले संक्रमितको निगरानी नगरेको पुष्टि हुन्छ । ‘जबसम्म संक्रमितको व्यवस्थापन र निगरानी हुँदैन, तबसम्म संक्रमण घट्दैन,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्तले भने, ‘नेपालगन्जमा होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएको खबर आइसकेको छ । सरकारले दिनहुँ ११ हजार संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको बाहिर आइसक्यो, त्यसअनुसार तयारीचाहिँ देखिएन ।’
यसअघि संक्रमित देखिनेबित्तिकै उनीहरूले भेटेका सबैजसोको कन्ट्र्याक ट्रेसिङ हुन्थ्यो । अहिले ट्रेसिङ हुनै छाडेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको निकाय कन्ट्र्याक ट्रेसिङको काम स्थानीय तहको हो भन्दै पन्छिने गरेको छ । यस पटक देखिएको यूके भेरिएन्ट यसअघि देखिएको भन्दा चाँडो र धेरैलाई सर्ने भएकाले पनि अधिक सावधानी अपनाउनुपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य विभागकी सहप्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठले बताइन् । दोस्रो चरणमा देखिएको यूके भेरिएन्ट ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म छिटो फैलिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने बताइन् । ‘मृत्युदर ६४ प्रतिशत बढी हुन्छ, अस्पताल भर्ना हुने दर अरूभन्दा २.६ गुणा बढी हुन्छ । हरेक उमेर समूहलाई गम्भीर बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘समुदायमा संक्रमण बढिरहेको छ । संक्रमित भएको शंका लाग्नेबित्तिकै धेरै नसोची नजिकको संस्थामा जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ पहिला पुरुष संक्रमित हुने दर बढी थियो । यसपालि महिलामा पनि संक्रमण बढी देखिएकाले कोरोना समुदायमा द्रुतगतिमा बढेको अनुमान गर्न सकिने उनले बताइन् । ‘तथ्यांकमा देखिएभन्दा बढी संक्रमित छन्,’ उनले भने ।
टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक सागर राजभण्डारीले भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा संक्रमित थपिएको बताए । आफ्नो ल्याबबाट ३५ प्रतिशतसम्म संक्रमित देखिन थालेको उनले जनाए । यो अस्पतालको ल्याबमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ६७ जनाको पीसीआर गर्दा १ सय ४ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो । संक्रमितको संख्या घटाउन निगरानी जरुरी रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर बनाएर भए पनि निगरानी गर्नुपर्छ, संस्थागतमा राख्दा कम्तीमा स्वास्थ्य अवस्था थाहा हुन्छ, अर्को व्यक्तिलाई सार्ने चान्स कम हुन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्ने र बजेट नदिएकै कारण केही गर्न नसकेको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले बताए । आफ्नो नगरपालिकामा सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएको ५ सय जना अट्ने यसअघि आइसोलेसन बनाइएको भवन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर एक गैरसरकारी संस्थालाई तीन वर्ष प्रयोग गर्न दिइसकेको उनले बताए । सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले राधास्वामी र वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘राधास्वामीको संरचनामा आइसोलेसन बनाउन चिठी पठाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘वीर अस्पतालको ५ सय जना अट्ने भवनको निर्माण सकिएकाले त्यहाँ पनि आइसोलेसन बनाउने कुरा भएको छ ।’ (कान्तिपुरबाट)